Askari ka tirsan Ciidanka Dowladda oo Muqdisho ku dilay Wiil Mooto Bajaajle ah – Banaadir weyne
Askari katirsan Ciidamada dowladda Soomaaliya, ayaa duhurnimadii maanta dil u geystay Wiil dhalinyaro ah oo watay Moota Bajaaj.
Dilka waxa uu ka dhacay nawaaxiga Isgoyska Taleex ee degmada Hodan, waxaana toogashada ay timid kadib markii ay wada murmeen Askariga iyo Mooto Bajaajlaha.
Goob joogayaal waxey soo shegeen in Bajaajlaha uu isku dayay inuu ka gudbo wado u xirneyd Ciidamada amaanka, iyadoo taasi ay keentay in askariga rasaas u adeegsaday, taasoo kaga dhacday Caloosha, isagoo isla goobta ku geeriyooday.
Askariga dilka geystay ayaa durba goobta isaga cararay, waxaana goobta tagay Ciidamo boolis ah, iyagoo qaaday meydka marxuumka, waxeyna ku raad joogaan gacan ku dhiiglaha oo si baxsad ahaan goobta uga tagay.
Majirto wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha amniga degmada Hodan iyo kuwa Gobolba oo la xiriirta dilka loo geystay Moota Bajaajlaha, iyadoo Ciidamada amaanka si Caaidyan ah ay u dilaan dhalinyarada ku shaqeysata Mootada Saddexda lugood leh. – Universal Somali TV